Portable 808 nm osisigxina diode icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname depilation iinwele nokususwa umatshini njengoko-800p-Iinwele nokususwa umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Inkqubo ye-diode las808 ye-XNUMXnm yenziwa ngokubanzi kwaye yenkqubo efanelekileyo yokususa iinwele ekusebenziseni kwezonyango. Ukukhetha okukhethiweyo kwefotothermolysis (SPTL), ukuthelekiswa kwesantya esithile sokukhanya kunye nobungakanani bempumlo ukufumana isiphumo esifanelekileyo kwisichumisi esijolise kwisiphumo esincinci kwisithambisi esijikelezileyo.
Inkqubo ye-diode las808 ye-XNUMXnm yenziwa ngokubanzi kwaye yenkqubo efanelekileyo yokususa iinwele ekusebenziseni kwezonyango.
Ukukhetha okukhethiweyo kwefotothermolysis (SPTL), ukuthelekiswa kwesantya esithile sokukhanya kunye nobungakanani bempumlo ukufumana isiphumo esifanelekileyo kwisichumisi esijolise kwisiphumo esincinci kwisithambisi esijikelezileyo.
I-Lasers inokubangela umonakalo wasekhaya ngokufudula ngokukhetha ubushushu obujolise kumnyama okujolise kuyo, i-melanin, kwindawo ebangela ukukhula kweenwele, i-follicle, ngelixa lingafudumalanga lonke ulusu. Ukufakwa kwamandla kweenwele ze-follicle melanin kunamandla kuma-808nm wavelength, onokuthi onakalise ifilimu ngendlela efanelekileyo, okwangoku akukho ndlela imbi yokuphendula ulusu. Izixhobo zesistim kunye nenkqubo yokupholisa emanyanisiweyo, enokwenza ubushushu bolusu buzinze nge-5 ℃, inkqubo ikhuselekile kwaye ikhululekile.
Thelekisa enye indlela yokususa iinwele
Inombane omde onokuthi ubonelele ngeziphumo ezingcono kubantu abanolusu olumnyama.
Amaza amade abonelela ngokungena nokukhuselekileyo ukungena esikhumbeni.
Abantu abaneenwele ezimnyama nezintsundu zezona zibonelelo.
Vumela iindawo ezinkulu zomzimba ziphinde zikhawuleze.
Unyango olukhawulezayo nolungenazintlungu
1. I-600W amandla aphezulu e-laser
2. I-USA ingenise imigoqo ye-laser ehambelanayo
3. Ubomi besandla buhlala ixesha elingama-20,000,000 isibhamu
4. Isiphatho sokupholisa ngesandla seSapphire: gcina 0 ~ -5 ℃ ukuqhakamshelana nokuphola
5. Umgangatho wegolide wokususa iinwele ngokusisigxina: kuzo zonke iintlobo zolusu lokususwa kweenwele
6. Inketho yobungakanani be-Spot: 15 * 15mm, 15 * 20mm. Ubukhulu obukhulu bebala ligubungela indawo enkulu yonyango, unyango olukhawulezileyo
7. Inkqubo yokulawula imowudi ngokuzenzekelayo: Ukuseta ngokombala wesikhumba, umbala weenwele, owokwabelana ngesondo
8. Inkqubo yokuzihlola ikukuqinisekisa ukusebenza okuqinisekileyo: ukhuseleko olugqithisileyo, ukuhamba kwamanzi kunye nokujonga ubushushu
9. Inkonzo yasimahla ye-OEM
10. Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwecandelo: Amaxabiso okhuphiswano kunye nenkxaso ethe ngqo yobugcisa
I-15mm × 15mm (ukhetho lwe-15mmx20mm)